အမြန်ဆုံး ပြောင်းလဲတိုးတက်ခြင်လျှင် …… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » အမြန်ဆုံး ပြောင်းလဲတိုးတက်ခြင်လျှင် ……
အမြန်ဆုံး ပြောင်းလဲတိုးတက်ခြင်လျှင် ……
Posted by စိန်ကြက်ဆင် on Jan 15, 2013 in Aha! Jokes, Satire | 25 comments
ကျောက်ခေတ်ကြီး ပျက်သုန်းသွားတော့ လူနေမှု အဆင့်စနစ်တွေ တိုးတက်လာတယ်
ဗိုက်ကင်းတွေ ပျက်စီးတော့ လူတွေအကြား စည်းလုံးစွာ နေထိုင်တဲ့ စနစ်အဆင့်တွေ တိုးတက်လာတယ်
တိုင်းပြည်၊ နယ်မြေ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း ၊ စနစ်ခေတ်၊ အစရှိတာတွေ ကြားမှာ ထင်ပေါ်သူ ဦးစီးဦးဆောင်သူတွေ ကွယ်လွန် အနိစ္စရောက်ကြတဲ့ အခါ သူတို့ရဲ့ စနစ်တွေ အယူအဆတွေတွေဟာ လက်ဆင့်ကမ်းကျန်ခဲ့တာတွေ ( ကောင်းခြင်း၊ ဆိုးခြင်း မူတည်) ရှိခဲ့သလို ဆ်ိတ်သုန်းပျောက်ကွယ် ခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့ကြတယ်။ တဖက်မှာလဲ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာတာတွေ ရှိပြန်ရော …….. ပြောင်းလဲဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ကမ္ဘာလောကကြီးမှာ ဘယ်အရာမှ မတည်မြဲသလို ဘယ်အရာကိုမှလဲ ခိုင်တည်အောင် ရပ်တန့်ပီး ထိန်းမထားနိူင်ဘူး ..။
ဆိုတော့ကာ ယနေ့ခေတ်မှာ အမြန်ဆုံး ကောင်းတာရော ဆိုးတာပါ ပြောင်းလဲတိုးတက်ချင်ရင်
အယူအဆဟောင်း ၊ စနစ်ဟောင်း၊ အတွေးအခေါ်အဟောင်းတွေ ပျက်သုန်းပေးရမယ်၊ အဲ့ပိုင်ရှင်တွေ သေပေးကြရမယ်။
ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ကြီး တိုးတက်ပြောင်းလဲ(အမြန်တကာ့ အမြန်ဆုံး) စေချင်ရင်တော့
ဦးသန်းရွှေကြီး အပါအ၀င် အစိုးရဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ၊ သူပုန်ဗိုလ်အဟောင်း၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် အဟောင်း၊ ခရိုနီအဟောင်း၊ အရင်းရှင်အဟောင်း ၊ နိူင်ငံရေးသမားအဟောင်း
စီးပွားရေးသမားအဟောင်း ၊ ကွန်မြူနစ်အဟောင်း၊ လစ်ဘရယ်အဟောင်း၊ ဆိုရှယ်လစ်အဟောင်း၊ ဒီမိုကရေစီအဟောင်း ရှိရှိသမျှ အဟောင်းတွေ
အားလုံး လျော့ဈေးမရှိ ၊ လက်ကျန်မရှိ အကုန်သေပေးကြပါ …။
ကျုပ်တို့ အသစ်တွေ ခေတ်သစ်၊ စနစ်သစ်၊ နိူင်ငံသစ်၊ မူဝါဒသစ်၊ စိတ်သစ် လူသစ်နဲ့ အသစ်သစ်တွေ ဖန်တီးတည်ဆောက်ကြမယ်…..။
ရီဗော်လူးရှင်း၊ + ရီဖော်မေးရှင်း = ရီဖော်လူးရှင်း ( ရီဗယ်လေးရှင်း )
အဲ … တခုကျန်သေးလို့ မန်းဂဇက်ကြီးလဲ အမြန်ဆုံး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အသစ်တွေနဲ့ တိုးတက်ခြင်ရင် …
ရဲစည် မင်း……………ချက်ချင်း လဲသာ သေလိုက်တော့ကွာ
အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်များအနက် ရဲဘော်ကိုထွေးကို အားကျသူ ….. ကိုဖုန်းမော်လို အသက်ပေးလိုသူ
အူးလေးရဲစည် တေတော့မှာလား ဟင် …. ။
အပိုရီးများ အသင်းတည်ထောင်မို့ … ရန်ပုံငွေ ရှာတဲ့အနေနဲ့ ဖဲလိုက်ရိုက်မလို့ … ခိခိ
သေတဲ့သူစာရင်းကို အတိအကျကိုတွက်ထားတာပဲ တော်ပါပေတယ်
အရှေ့ကလူတွေနေရာမှာ အစားဝင်ရောက်ဖို့ နောက်ကလူတွေ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီလား
အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင် ရှေ့ကလူတွေကို မရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားလိုက်လို့ ရပါပြီ
ဖိုးဖြေချင် အတွက် သိပ်ကောင်းတဲ့ မေးခွန်း
ရဲစည်ရေလို့ တပ်ထားတဲ့ အတွက် Green Rose ကို ၆၀ဘွန်းနဲ့ ၇၀ဘွန်း ကြားမှာ သတ်မှတ်လိုက်ပီ
ကျနော်တို့ ကလေးတွေကို လျော့တွက်သလား အရင်မေးပါရစေ….
အနည်းဆုံး ကျနော့်ထက်တော့ ၁၅နှစ်ကနေ ၂၄နှစ်လောက် ကြီးမယ်ထင်
ဒီမေးခွန်းမေးကတည်း အထဲမှာ အဖြေတချို့ ပါသွားပါပီ
နှုတ်တစ်ရာ စာတလုံးမို့ နောက်တကြိမ် ပြန်လာဖြစ်ခဲ့ရင် စိတ်ဆင်းရဲအောင် ပြန်ဖြေပေးပါ့မယ် အဒေါ်… တကယ်ပြောတာ
စောင့်နေမယ် နောက်ထပ် ၄၈နာရီအထိ …
အဲ…. ပထမဆုံး ရဲစည်ရေ လို့ ခေါ်ရခြင်း.. ကိုရှင်းပါ့မယ်.. Green Rose က ဒီရွာထဲက Member တွေ အားလုံးနီးပါးကို သူတို့ရဲ့ user name တွေအတိုင်းပဲ သုံးနှုန်းခေါ်ဝေါ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို စာလုံးပေါင်းထားတဲ့သူကိုတောင် မြန်မာလိုစာလုံးပေါင်းပြီး မခေါ်ဝေါ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အသက်အရွယ်တွေ၊ ကျား၊မ ဆိုတာတွေ မခွဲခြားတတ်တာရယ် ၊ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ကလောင်နာမည်တွေကို လေးစားတန်ဖိုးထားသော အားဖြင့်ရယ်ပါ။ Green Rose ကိုယ်တိုင်လည်း Green Rose ပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်။ နောက် တချို့ ဥပမာ “မောင်ပေ” ဆိုတာမျိုးကျတော့ ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းရမှာ နည်းနည်းအဆင်မပြေလို့ ရှေ့ကလူတချို့ ခေါ်သလို “ဦးပေ” လို့ ခေါ်ဝေါ်ပါတယ်။…
ဆိုလိုချင်တာ “ရဲစည်” လို့ခေါ်လိုက်တာ ဒီအတိုင်းပဲ ခေါ်လိုက်တာပါ၊ အဲဒီ့အတွက် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ် သွားတယ်ဆိုရင် တော့ အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်….
နောက်ပြီး.. . ကလေးတွေရော.. လူကြီးတွေရော၊ လူငယ်တွေရော၊ လူရွယ်တွေရော.. မည်သည့်အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြားရှိသူကိုမှ လျှော့မတွက်တတ်ပါဘူး.. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အသက်အရွယ်ဆိုတာ လူတိုင်းဖြတ်သန်းရမယ့် မှတ်တိုင်တွေမို့ပါ.. ယနေ့လူငယ်တွေဟာ နောင်လူကြီး ဖြစ်လာကြမှာပါ.. လူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးကို သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ သတ်မှတ်လို့ မရစကောင်းပါဘူး။..
တစ်ခါတစ်လေ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာတာနဲ့ အမျှ အတွေ့အကြုံတွေ များပြားလာတဲ့ လူကြီးတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေက လူငယ်တွေအတွက် အဖိုးတန်ပါတယ်။ အမှန်က လူကြီးနဲ့လူငယ် ညှိနှိုင်းပြီး ၊ လက်တွဲပြီး အလုပ်လုပ်ကြရမှာပါလို့ပဲ……
မောင်ရဲစည် ၏ စေတနာသဒ္ဒါတရားဖြင့် လှူဒါန်းသော ဒေါ်လာများ အမြန်ဆုံးလိုအပ်နေပါကြောင်း
အသစ်နဲ့ အဟောင်း ဟာမိုနီဖြစ်အောင် လုပ်သင့်ပါတယ် လို့
မိန်းမနဲ့ အဆင် မပြေဘူး ထင်တယ် …
သေချင်ရင်လည်း ကြိုပြော …
ငါက တရဲ ကျောက်တတ်ဒယ် .. ဟီဟိ …
ဝှီး.. ဝှစ် ဝှစ် (လေသိုင်းနဲ့ လစ်)
တိုးတက်ဖို့ အတွက် ကြီးမိုက်သေပေးပါ့မယ်။
မပြောလဲ သေခါ နီးတွေ ဆိုတော့ သေသွားရင်ဘဲ ကောင်းစေချင်လို့ သေပေးသလိုဖြစ်ရတော့မယ် … ကွိ.
ဒီတော့ မထူးတော့ ပါဘူး ….. သေရင်တောင် အာဇာနည်မဖြစ်တောင်
ဗာလာနည် ( ဗာလာနံ+အာဇာနည် ) တော့ ဖြစ်မှာဆိုတော့ကဲ ကဲ
သေပေးလိုက်ကြစို့ ရဲ့  ………
တကယ်ကောင်းမယ်ဆို… သေပေးမယ်…လောလောဆယ်တော့ ဒါပဲပြောတတ်တယ်…
အိမ်း ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အဟမ်း ဟမ်း…. ကိုရင် ရဲစည် ပြောသလို ပဲ အဘ အာဂ လည်း အသက်ကကြီးပြီလေ..။ ဒီတော့ အရက်သမားလောက ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက် အဘ တို့ရဲ့ အရက်သမား သမဂ္ဂအတွက် အဘသေပေးလို့ ကောင်းမွန်မယ်ဆိုရင်တော့ အဘ တစ်နေ့ကို အရက် ၂ဆတိုးသောက်ပြီးသေပေးဖို့အဆင်သင့်ပါပဲကွယ်.. အိမ်း အိမ်း လူငယ်တွေ ကောင်းမယ်ထင်လို့ လုပ်တဲ့ ကိစ္စ ဆိုတော့ အဘလည်း မငြင်းဆန်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အဘ အမြန်သေအောင်လို့ အိမ်ကို အရက်များ မပျက်လာေ၇ာက် ဆက်သစေလိုသကွဲ့..။ အဟမ်း…အိမ်း…အိမ်း..။ ကောင်းလေစွ
တိုးတက်ဖို့ ဆိုတာက တစ်ယောက်ပြိးတစ်ယောက် သေနေရုံနဲ့ မပြီးဘူးထင်တယ်….။ အသုံးမကျတဲ့ စရိုက် အသုံးမ၀င်တဲ့ ဓလေ့ထုံးစံ အသုံးချမရတော့တဲ့(တန်ဘိုး တွက်မရတဲ့ ပကာသနဘက်ကယဉ်ကျေးမှု) ရိုးရာအမွေ ….။ ကိုယ့်ဘက်ကိုပဲကြည့်တတ်တဲ့ အတွေးအခေါ် ….။ အများအတွက်ဆို လက်တွန့်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ် ….။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ထိခိုက်နစ်နာစေပြီးမှရတဲ့ လွတ်လပ်မှု ပျော်ရွှင်မှုကိုမှ တန်ဘိုးထားချင်တဲ့ စည်းပျက်ကမ်းပျက် စရိုက်ဆိုး ဒါတွေ အကုန်သတ်နိုင်မှ သေကုန်မှ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာလိမ့်မယ်ထင်တယ်….။ ခုပဲကြည့်ဦး ပြုပြင်ပြောင်လဲနေပါပြီဆိုပြီး အရင်အတိုင်းပဲ အသံချဲ့စက် အသံကုန်ဖွင့်ပြီး အလှူခံတဲ့ကိုယ်တော်ကလည်း အလှူခံလို့ကောင်းတုန်း ….။ ဈေးထဲက ထမင်းဆိုင်ကလည်း ရော်ဘာစနဲ့မီးမွှေးလို့ကောင်းတုန်း ….။ အိမ်ကြီးရှင်မမတွေကလည်း ငရုပ်သီး ဆီသတ်လို့ ကောင်းတုန်း…။ မင်္ဂလာဆောင်အကြောင်းပြပြီး တစ်ညလုံး တစ်ဝုန်းဝုန်း တစ် ဒိုင်းဒိုင်း ဆူညံပွက်လို့ကောင်းတုန်း ….. လမ်းပေါ်က ခွေးလေခွေးလွင့်တွေကလည်း ညနက်သန်းခေါင် အူလို့ကောင်းတုန်း ….။ ဘာတဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ လွတ်လပ်မှုက တစ်ခြားတစ်စုံတစ်ယောက်ကို (အနံ့နဲ့ အသံနဲ့တောင်မှ) အနှောက်အယှက် မဖြစ်စေရဘူးဆို ….။ ဒါတွေကို တားဖို့ ကန့်ကွက်ဖို့ ဘယ်မှာ ဘာဥပဒေ ထုတ်ထားသေးလဲ …။ ဘာစည်းကမ်းချက်ထုတ်ပြီး တိတိကျကျ အရေးယူနေပြီလဲ….။ ဒါတွေကို မလုပ်ပဲ မြွေတွေလို အရေခွံလဲရုံ လောက် လူမြင်ကောင်းရုံလောက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေရင်တော့ ဒုံ့ရင်း ဒုံရင်းပဲနေဦးမှာ သေချာတယ် ………..။
ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်.. ကိုယ်တိုင်(အနည်းဆုံးတော့) လွတ်လပ်ခြင်းအရသာရလိမ့်မယ်..
မြန်မာတွေ.. ကမ္ဘာတန်းမှာနောက်ကျကျန်ခဲ့တာ.. စနစ်ကြောင့်မဟုတ်ဖူးလို့.. ကျုပ်ခဏခဏပြောတယ်..
မြန်မာဟာ.. ယူအက်စ်မှာနေလည်း.. မြန်မာပဲ..။ ဥရောပမှာနေလည်း မြန်မာပုံစံပဲ..။ ဂျပန်၊စင်္ကာပူမှာရှိလည်း… တူတူပဲ..။ မြန်မာဟာ… မြန်မာပဲ..။
လူမျိုးတမျိုးရဲ့.. စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို.. ပြုပြင်ထိန်းကြောင်းလွှမ်းမိုးတာ.. ဘာသာရေးပါ..
.. ပြောင်းပြန်လှန်..ဂငယ်ကွေ့.. ပြောင်းတွေးနိုင်ကြစေ…။
ဒီလိုလုပ်ချင်နေရင်.. တခြားတနည်းတွေးပြီး.. ဟိုလိုလုပ်ပါ…။
ဟိုလိုတွေးမိရင်.. တခြားတနည်းနဲ့.. ပြောင်းပြန်ပြန်တွေးပါ…။
ပုံမှန်အော်တိုမစ်တစ်ရောက်လာတဲ့.. အတွေးအမြင်ကို.. ပြောင်းပြန်ပြန်တွေးမြင်ကြည့်ပါ..။
အဲဒါဆို.. မြန်မာဟာ.. နောက်ဂျန်နရေးရှင်း ၂ခုလောက်ပြီးရင်.. ကမ္ဘာတန်း.. နောက်ဆုံး၁၀ကနေ.. ရှေ့ဆုံး၁၀ထဲ.. ရောက်လာလိမ့်မယ်..။
မိန်းမကယူပြီးသွားပြီ.. စောစောကသာသိရင် ယောက်ျားယူပါတယ်..
အချိန်မနှောင်းသေးပါဘူး … ယောကျာင်္းထပ်ယူလိုက်လေ.. ဘပု ရှိတယ် … :harr:
ဆြာအုပ်ရေ .. ဆြာအုပ်မန့်တာ အော်ရီမိပါကြောင်း..
ရပ်.ကျေး နေသူ ဥပဒေ မှာ ရုံးက ဖမ်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ ရွာသား လိုက်နာရမယ့် ဥပဒေ
နှစ်ခု တွေ့ဘူးတယ်(မြန်မာ့ အလင်းသတင်းစာထဲမှာ)
ခွင့်ပြုချက် မတောင်းဘဲ အသံချဲ့စက်ဖွင့်လျှင်
ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ လူစု ပွဲလုပ်ရင် ဆိုတော့
ဥပဒေ ကတော့ ရှိနေပြီထင်တယ်။ လိုအပ်နေတာက
စည်းကမ်းသိတဲ့ (တိုင်မယ့် သူရယ်.တိတိကျကျ အရေးယူမဲ့သူရယ်)
အဓိက ကတော့ တိုင်မယ့်သူပေါ့။ (ကျွန်တော့် သဘောပြောရ ရင်
သိဖို့ ကအဓိက ဖြစ်ပါတယ်.သိပြီးရင်။ သိတဲ့ အတိုင်း ကျင့်ကြံ နေထိုင်သွားရမှာ)
ဟုတ်ကဲ့ ကိုရဲစည်ပြောသလိုဆို ဒေါ်စုလည်း သေပေးရမယ့် အထဲမှာပါတာပေါ့နော်….
တနည်းအားဖြင့် သူလည်း နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းကြီးပဲ….
သူသေရင် သူ့ နေရာ ဘယ်သူများ ဆက်ခံပါမလဲ….
စစ်တပ်ကလူတွေကို သေခိုင်းမှာလား စိတ်မပူနဲ့ နော်…..
တတပ်လုံးက စီနီယာ တန်းစီပီးသား…… စမူဆာပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့ ဖွဲ့ စည်းပုံမှာ….
အထက်က လူတွေ သေပေးလိုက်ရင် အောက်က မ၀မလင်စားနေရတဲ့ လူတွေက တက်ပီး စားပိုးနင့်အောင်စားလိုက်မှ ပိုဆိုးပါအုံးမယ်ကွယ်….
ကျွန်တော်တို့ စက်ရုံမှာ MD က ပြောဖူးတယ်. ကိုရဲစည် ပြောသလို
ဒါပေမဲ့2ကြိမ်.
၁ ကြိမ် မှာ ကျွန်တော့်ကို ပြောတာ မင်းတာဝန်ယူပြီးလုပ်နိုင်ရင် ဒါရိုက်တာ MD လုပ်မလား
ငါဖယ်ပေးမယ်. လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားထား (ဆိုတော့ အားတွေ ရှိသွားလိုက်တာ)
၂ ကြိမ် မှာ မန်နေဂျာတွေ အားလုံးကို ပြောတာ (ခုဆို နောက်လှိုင်းတွေက ပိုမြင့်လာတယ်၊
မင်းတို့ ကို ကျော်သွားတော့မှ ……..)(ဆိုတော့ နောက်လှိုင်းတွေ ပိုမြင့်လာအောင်
ပင့်တင်ပေးနေတဲ့အား၊ ဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့ ဗဟုသုတ၊ တွေးခေါ် ပုံ တွေ ကိုလျှစ်လျှူရှုသလို
ခံစားရတယ်.ကျွန်တော်တို့လည်း ပိုတော်ရင် ဖယ်ပေးဖို့ စိတ်ကူး ရှိလို့ ပါ) ဆိုတော့
ဒီပိုစ့် ကို လူငယ်တွေ ဖတ်ပြီး ပြင်ဆင်ထား ကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်
အမြဲ သေနေတဲ့ (အနတ္တ မို့လို့ ဖြစ်ပြီးတိုင်း ပျက် နေတဲ့)
ဖျား ဖျား တော် ပါသေးရဲ့။
0 (သုည) နဲ့ ဆုံးတဲ့ ဘွန်း မဟုတ်ပေလို့။
၄၀ မှာလဲ မဘွန်း၊
၅၀ မှာလဲ မဘွန်း၊
၆၀ မှာလဲ မဘွန်း၊
၇၀ မှာလဲ မဘွန်း၊
ဒီတော့ အဲဒီ စာရင်းထဲ အပါဘူးနော်။
တကယ်တိုးတတ်မယ်ဆိုရင်တော့ သေဖို့အသင့်ပဲ ဆရာ ရေ …
ဒါပေသိ ကျုပ်အသက်က ဘူကြီးတွေ မဘွန်း ဘူး ….
လေးချပ် ပေါက်သေးတယ် …
ဟိဟိ နောက်ထှာနော် ..